Miyuu Kovacic dheeli doonaa kulanka Champions League ee ay kooxdiisa Chelsea la ciyaari doonto naadigiisii hore ee Real Madrid? – Gool FM
Miyuu Kovacic dheeli doonaa kulanka Champions League ee ay kooxdiisa Chelsea la ciyaari doonto naadigiisii hore ee Real Madrid?
Ahmed Nur April 24, 2021
(London) 24 Abriil 2021. Kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Chelsea ayaa ku balansan kulanka lugta koowaad ee wareegga nus dhammaadka Champions League toddobaadkan.
Ciyaaryahanka khadka dhexe kaga ciyaara Blues ee Mateo Kovacic ayaa fursad u heli karay inuu ka hor tago kooxdiisii hore, hase ahaatee, kooxda reer England ayaa xaqiijisay inuu xiddigan dhaawac ku seegayo.
Tababaraha kooxda Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa xaqiijiyay inaysan suuro gal ahayn inuu Kovacic ciyaaro kulanka ay kooxdiisa u safreyso Madrid, hase ahaatee, uusoo laaban doono ciyaarta ay Fulham la ciyaari doonaan horyaalka.
“Mateo Kovacic wali waa uu maqan yahay, balse inta kale waa diyaar, waxay ila tahay inaan rajeyneyno inuu ciyaaro kulanka Fulham oo u dhexeeya kulammada Madrid, laakiin wali taas hubanti ma ahan” ayuu qiray Tuchel.
Laacibka khadka dhexe ee reer Crotia ayaa dhaawac muruqa ah kaga maqnaa garoommada saddexdii kulan ee lasoo dhaafay, waxaana uu nasiib u yeelan waayay inuu caasimadda dalka Spain ku booqdo kooxdiisii hore ee Los Blancos oo uu kasoo hayaamay 2018.
Shaxda ramiga ah kulanka kooxaha Liverpool vs Newcastle oo la shaaciyey... (Salah & Mane oo..)
ESPN oo shaacisay qayb ka mid ah faah-faahinta heshiiska ay Barcelona u diyaarisay Lionel Messi